एनसेलले ल्यायो ‘ननस्टप’ अफरहरू, कसरी सुचारु गर्ने ? हेर्नुहोस् - Laganikhabar
एनसेलले ल्यायो ‘ननस्टप’ अफरहरू, कसरी सुचारु गर्ने ? हेर्नुहोस्
शुक्रबार, १९ भदौ २०७७, ०९ : १६ मा प्रकाशित
लगानीखबर, काठमाडौं । एनसेलले आफ्ना फोरजी ग्राहकका लागि विभिन्न अफरहरू ल्याएको छ । कम्पनीले ननस्टप योजना अन्तर्गत ग्राहकले युट्यूब, टिकटक र फेसबुकको ननस्टप प्याकेजमा बोनस डेटाको फाइदा समेन लिन सक्ने छन् ।
हाल सञ्चालनमा रहेको ननस्टप युट्यूबप्लस अफरमा थप विकल्प प्रदान गर्दै अफरहरू ल्याएको बताइएको छ । ‘प्लस’ थिमअन्तर्गत ल्याइएका यी ननस्टप अफरहरू बिहीवारदेखि सञ्चालनमा आएको कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार आफूलाई मन पर्ने सामाजिक सञ्जालको प्याक सुचारु गरेपछि प्याकको समयसीमा बाँकी भएसम्म ननस्टप प्रयोग गर्न सकिने छ । ग्राहकले ७ दिनको ननस्टप टिकटक प्याक १०० रुपैयाँमा सुचारु गरेपछि अन्य प्रयोजनका लागि इन्टरनेट चलाउन थप ४ जीबी डेटा बोनसस्वरूप प्राप्त गर्ने छन् ।
यस्तै युट्यूब हेर्न चाहने ग्राहकका लागि ननस्टप युट्यूब प्याक पनि रहेको छ । ग्राहकले आफ्नो आवश्यकताअनुसार करसहित २५ रुपैंयाँमा १ दिनका लागि यो प्याक सुचारु गर्न सक्ने छन् । त्यस्तै ग्राहकले ४ जीबी बोनस डेटासहितको ७ दिनका लागि युट्यूब वा फेसबुकको कम्बो प्याक करसहित १९१ रुपैयाँमा सुचारु गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
साथै ग्राहकले ३० दिनको समयावधि रहेको ६ जीबी बोनस डेटासहितको ननस्टप युट्यूब प्याक करसहित ४५९ रुपैयाँमा खरीद गर्न सक्ने छन् । कम्पनीका अनुसार बोनस डेटा ग्राहकले अन्य कुनै प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
ग्राहकले उल्लेखित ननस्टप प्याक सुचारु गरेपछि हरेक दिन ५०० एमबीका दरले ७ दिनसम्म करसहित २५ रुपैयाँमा ३ हजार ५०० एमबी थप डेटो लिन सक्ने छन् । उक्त डेटा ग्राहकले फेसबुक, टिकटक वा युट्यूब चलाउनका लागि प्रयोग गर्न सक्ने छन् । यी अफर सुचारु गर्न *१७१२३# डायल गर्नुपर्नेछ, त्यसपछि त्यहाँ दिएको निर्देशन अनुसार सेवा सुचारु गर्न सकिनेछ ।
रिचार्जरमा दशैं बोनान्जा : अफर भित्र अफरमा छुटै छुट
ई फार्मको भर्चुअल खसी मेला : भिडियो कल मार्फत बुकिङ, घरमै डेलिभरी !
प्रभु मनि ट्रान्सफरको चार्डपर्व अफर
छोरी हुनेको घरमा अब निःशुल्क इन्टरनेट
आइएमई पे ले ल्यायो दसैँको बम्पर अफर
कोरोनाबाट थप ११ जनाले गुमाए ज्यान, कति पुग्यो मृतकको संख्या ?